I-SXSW ka-2014 yokuSebenza ngokuSingathwa kweNkcazo Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 18, 2014 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 UJenn Lisak Golding
Enye yezinto ezipholileyo malunga neqabane lethu leMeltwater isoftware yokujonga imidiya yoluntu Kukuba ungazibek 'esweni izihloko kunye neziganeko ngokucokisekileyo ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo weemvakalelo kunye nokuthandwa. Kulo nyaka, baqala ukubeka iliso kwi-buzz ejikeleze i-SXSW ngoFebruwari 26 kwaye ndafumana iindlela ezithile ezinomdla:
Impempe ye-NSA, u-Edward Snowden, yayiyinto enkulu. I-7% yayo yonke i-buzz yentlalo yayihlobene ne-Snowden.
Amadoda athumele okuninzi kakhulu ekuhlaleni: iipesenti ezingama-62 xa kuthelekiswa nama-38% yabasetyhini.
UJustin Bieber ubene-400% ngaphezulu kokukhankanywa kuneKrumpy Cat! (Yithi whaaaa?)
Kuzo zonke izibalo ezipholileyo, jonga i-infographic engezantsi. Kwaye ungalibali ukukhangela abaxhasi bethu iMeltwater izixhobo zokujonga imidiya yoluntu kumashishini.
Itekhnoloji ilibumba njani ikamva lokuthengisa
Mar 18, 2014 ngo-11: 55 AM
Akukho nto ingako ngomculo omtsha okanye itekhnoloji entsha. Andiboni nakuphi na ukukhankanywa kwesiganeko esibuhlungu (ubomi obu-3 bulahlekile) be-SXSW 2014. Ukuxelela kakhulu.
Mar 18, 2014 ngo 3:11 PM
Hey John - imibuzo elungileyo. Ndiyivelisile le infographic, ke ndiya kuphendula: sibeke iliso kwinxalenye edibeneyo yenkomfa, eyaqala ngoMatshi 7-11. Ke, ayithethi ngengozi embi eyenzeka ngoMatshi 12. Siyavuma ukuba kunomdla ukuba bekungekho ncoko malunga neteknoloji entsha ngeli xesha. Kwaye, njengomntu owayekuMlambo oBomvu iintsuku ezi-2 ngaphambi kwaloo ntlekele imbi, intliziyo yam iphuma kuye wonke umntu ochaphazelekayo.